အဆိုပါမေ့လျော့ဘုံ၏မလှုပ်မရှားချန်ပီယံလိဂ် (Idle Champions of the Forgotten Realms) - 2Game
မလှုပ်မရှားချန်ပီယံလိဂ်ချန်ပီယံတစ်ပါတီစုဝေးနှင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းမဟာဗျူဟာ၏အနုပညာကျွမ်းကျင်ရန်ကစားသမားစိန်ခေါ်။ ကစားသမားများအထူးစွမ်းရည်ထုတ်ဖေါ်ဖို့သူတို့ကိုအဆင့်မြှင့်တင်သစ်သူရဲကောင်းများသော့ဖွင့်ခြင်း, မော်ကွန်းဂီယာကိုစုဆောင်းပါ။ ဘုန်းအသရေဖို့အဓိကသော့ချက်အစွမ်းထက်မိကျောင်းတစ်ဦးတိုကျခိုကျမှုကိုအနိုင်ယူဖို့ချန်ပီယံစွမ်းရည်ပေါင်းစပ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူသည်။
အဆိုပါအင်အားစု Grey ကစီးရီးထဲကနေပရိသတ်-အကြိုက်ဆုံးအပါအဝင်ထောင်ထဲ & နဂါး၏ကမ္ဘာမှကျော်ကြားချန်ပီယံလိဂ်, စုဆောင်းပါ။ ကန့်သတ်အချိန်ဖြစ်ရပ်များအတွက်သင့်ရဲ့ပါတီမှ add ဖို့ပိုချန်ပီယံလိဂ်နှင့်ဂီယာ Unlock ။
သူတို့ရဲ့အထူးစွမ်းရည်တိုးမြှင့်ဖို့ဦးချင်းစီချန်ပီယံများ၏အနေအထားကိုကျွမ်းကျင်တစ်ခုချင်းစီကိုစွန့်စားမှုပြီးပါကဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုချန်ပီယံရဲ့အရည်အချင်းများနှင့်ဂီယာကိုအကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ဖန်တီးရန်သတိထားအတွေးလိုအပ်သည်။ သာအာဏာအရှိဆုံးဖွဲ့စည်းမှုထောင်ထဲ & နဂါးမိကျောင်း၏လှိုင်းတံပိုးကိုနှိမ်နင်းပါလိမ့်မယ်။
ဓားကမ်းခြေမှတစ်ဆင့်ခရီးပေါ်တွင်သင်၏ချန်ပီယံလိဂ်ကိုယူပါ။ ကစားသမားသူတို့တစ်ဦးချင်းစီစွန့်စားမှုကိုင်တွယ်အဖြစ်မေ့လျော့ဘုံအတွင်းအကျွမ်းတဝင်နေရာများတွင်စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ပစ်လွှတ်ပြီးနောက်, ဂိမ်းဖကျြဆီးခွငျး၏သင်္ချိုင်းနှင့်အတူ Chult တစ်ဦးခရီးစဉ်နှင့်အတူစတင်တရားဝင်ထောင်ထဲ & နဂါး Adventures အားဖြင့်မှုတ်သွင်းအကြောင်းအရာနှင့် updated လိမ့်မည်။
ဒီဂိမ်းကန့်သတ်အချိန်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူပုံမှန် updated ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်များ Completing ကစားသမားရဲ့စုဆောင်းခြင်းမှ add အသစ်ချန်ပီယံလိဂ်နှင့်ဂီယာသော့ဖွင့်။
– သင်အခမဲ့မလှုပ်မရှားချန်ပီယံလိဂ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးကစားနိုင်, သို့သော်, In-ဂိမ်းပစ္စည်းများတချို့ပရီမီယံကိုမှန်ကန်ပိုက်ဆံများအတွက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
– In-ဂိမ်းအခမဲ့ရရှိခဲ့ကျောက်မျက်ရတနာပစ္စည်းကိရိယာများ, ဆေး, ရိုက်ကူးခြင်း, ရွှေဆံ့ကြောင်း Silver, ရင်ဘတ်နှင့်ရွှေရင်ဘတ်အဘို့ရွေးနှုတ်တော်မူနိုင်ပါသည်။
– Silver, ရင်ဘတ် (ဆန်းရှားပါးဖို့ဘုံ)3ကတ်များဆံ့။ သူတို့က “ရှားပါး” ပစ္စည်းကိရိယာများကတ်များကျဆင်းနေတဲ့အခွင့်အလမ်းအများရှိသော်လည်း, “က Epic” ပစ္စည်းကိရိယာများကတ်များဆံ့မခံကြဘူး။
– ရွှေရင်ဘတ် (ရှားပါးရှားပါးဖို့အဆန်း)5ကတ်များဆံ့။ သူတို့ဟာအမြဲမယ့်ရှားပါးပစ္စည်းကိရိယာများကဒ်ဆံ့နှင့်တစ်ဦးက Epic ပစ္စည်းကိရိယာများကဒ်ကျဆင်းနေတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
– အပိုဆု “ရွှေက Epic” ပစ္စည်းကိရိယာများကတ်များတိကျတဲ့ရွှေက Epic ကတ်များ ဟူ. အမည်ပေးထားပြီး Entertainment ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အခမဲ့နည်းလမ်းများမှတဆင့်ရရှိနိုင်ဖြစ်လာပေမည်သော်လည်းအစစ်အမှန်ပိုက်ဆံအရောင်းအများအတွက်ဝယ်ယူဆုကြေးငွေအဖြစ်ယေဘုယျအားဖြင့်သာရရှိနိုင်ပါသည်။
– In-App ကိုဝယ်ယူမှုကို item နှုန်း $5$ 50 ကနေအထိ။
* တစ် Silver, Chest ထဲကတစ်ရှားပါးယိုချန့်စခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 3.2% ဖြစ်ပါတယ်။
** တစ်ဦးရွှေ Chest ထဲကတစ်ရှားပါးတစ်စက်၏ခွင့် 100% သည်နှင့်တစ်ဦးက Epic တစ်စက်ကအနည်းဆုံး 10% ဖြစ်ပါတယ်။
Android အတွက် အဆိုပါမေ့လျော့ဘုံ၏မလှုပ်မရှားချန်ပီယံလိဂ် (Idle Champions of the Forgotten Realms) အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂိမ်းကစားထောင်ပေါင်းများစွာ၏မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမပါဘဲရဖို့အတှကျဝမျးသာပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်ကူညီနိုငျပါသညျ! အခမဲ့ဂိမ်းကို download လုပ်ပါရန်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးသင် file ကိုရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ အဆိုပါမေ့လျော့ဘုံ၏မလှုပ်မရှားချန်ပီယံလိဂ် (Idle Champions of the Forgotten Realms) apk download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှငျ့သငျတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်းအပြည့်အဝဗားရှင်းခံစားကြသည်! မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံး gadgets တစ်ခုမှာ iPhone ကိုဖြစ်ပါသည်, အဆိုပါမေ့လျော့ဘုံ၏မလှုပ်မရှားချန်ပီယံလိဂ် (Idle Champions of the Forgotten Realms) iOS အတွက်ထိပ်တန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ကစားရန်သင့်ကိုကူညီနိုငျပါသညျ! iPhone အတွက် အဆိုပါမေ့လျော့ဘုံ၏မလှုပ်မရှားချန်ပီယံလိဂ် (Idle Champions of the Forgotten Realms) ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိရိယာ၏မော်ဒယ်ကို select ရန်သင့်အားအကြံပြု, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကအသင့်တော်ဆုံးဂိမ်း app များကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သော .ipa ဖိုင်ကိုရွေးသင်ကစားပွဲရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ အဆိုပါမေ့လျော့ဘုံ၏မလှုပ်မရှားချန်ပီယံလိဂ် (Idle Champions of the Forgotten Realms) ကို download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှင့်သင်အိုင်ပက်သို့မဟုတ်, iPod တို့အတွက် အဆိုပါမေ့လျော့ဘုံ၏မလှုပ်မရှားချန်ပီယံလိဂ် (Idle Champions of the Forgotten Realms) ခံစားနေကြသည်။ ထိုအသတိရ! ကျနော်တို့နေ့စဉ်အခမဲ့ IPA ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကို update ဒါညှိနေဖို့!